फोनकल प्रतिमिनेट ३०१ रुपैयाँ ! - रमाइलो नेपाल डट कम| Ramailoo Nepal
You are at:Home»प्रविधि»फोनकल प्रतिमिनेट ३०१ रुपैयाँ !
By Ramailoo Nepal on	 December 4, 2017 प्रविधि
काठमाडौं : अहिले पनि फोन कल प्रतिमिनेट ३०१ रुपैयाँभन्दा अच्चम्म लाग्न सक्छ। तर यो यर्थाथ हो। नेपालबाट विदेशमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट ३०१.०३ पैयाँसम्म लाग्ने गरेको छ। स्मार्ट सेलले सार्वजनिक गरेको ‘इन्टरनेसनल कल ट्यारिफ‍’ मा उल्लेख भएअनुसार ‘पिटक्रेन आइल्यान्ड‍’ मा नेपालबाट फोन गर्दा ३०१.०३ रुपैयाँ लाग्नेगरेको छ। यो नेपालमा कुनै पनि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले तोकेमध्ये सबैभन्दा महँगो हो।
‘कलको दर निर्धारण पहिले यहाँका सेवा प्रदायक कम्पनी (अपरेटर), दोस्रो इन्टरनेसनल क्यारियर र तेस्रो टर्मिनेटिङ अपरेटरबीच हुने हो‍’, उनले भने, ‘यहाँका अपरेटरले कति रकम कमिसन राख्ने, क्यारियरले कति राख्ने र टर्मिनेटिङ अपरेटरले कतिमा उपलब्ध गराउने विषयले टेलिफोन शुल्कको दर निर्धारण हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो हिस्सा टर्मिनेटिङ अपरेटरको हुन्छ, उसले प्रतिमिनेट कति चार्ज गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ।‍’ निर्देशक खनालका अनुसार विशेष गरी यहाँबाट गरिब मुलुकमा गरिने फोनकलको दर उच्च हुन्छ। साना तथा गरिब देशमा यो नै एकमात्र डलर आम्दानी गर्ने प्रमुख स्रोत हो। ‘भारतबाट नेपाल कल गर्न महँगो पर्छ। तर नेपालबाट भारत कल गर्दा सस्तो हुनाको कारण भारतको टर्मिनेटिङ कल सस्तो छ भने नेपालको महँगो।
डलर आम्दानी गर्ने स्रोत भएकाले नेपालका टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि यो दर घटाउन नचाएका हुन्‍’, उनले थपे। नेपालको टर्मिनेटिङ कलको दर घटाउने कोसिस भए पनि सेवा प्रदायककै कारण सम्भव भएको छैन। यसका लागि अझै पनि गृहकार्य भइरहेको उनले बताए। खनालका अनुसार विदेशमा गरिने कलका दरमा कम्पनीबीच हुने फरक प्रतिस्पर्धात्मक बजारले बनाएको हो। कम्पनीले गर्ने मार्केटिङ, कल भोल्युम र कति मार्जिनमा काम गर्ने भन्ने कुराले नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीको कलको दर फरक भएको उनले बताए।
वेबबेस मोबाइल आईएमईआई दर्ता कार्यान्वयनमा लगिँदै